Hal -abuurka Faallooyinka Oktoobar-27-2020
Wow, ragga! waqti shixnad caaryada cusub !! Ha, Eeg sida ay ugu faraxsan tahay gabadheena suuqgeynta!
Hagaag, ka hor intaadan dhajin sawirkan, dhibaato ayaa qalbigayga ku dhibtooday. Saaxiibka leh xaddiyo aad u badan oo “linkedIn” ah ayaa i siin jiray talo naxariis leh: Haye, harry! ma wanaagsana in gabar lagu casuumo inay la istaagto wasakhaha, gaar ahaan wejiga dhoola cadeynta weyn! Kaalay, soo saarista caaryada waa inay noqotaa kiis aad u daran, ok? Ma laga yaabaa in ninka farsamada leh ee haya caliper ama warqad sawir si uu u beddelo uu aad ugu habboonaan lahaa?
Waqtigaas, sida uu tilmaamay, waxaan ka xumahay inaan kooxdeena ku adkeeyo, maadaama wixii aan sameeyay ay u muujiyeen akhristayaasha qaaliga ah aragti aan caadi ahayn. Waxay umuuqataa soo jiidashada indhaha dhagaystayaasha inay tahay ujeedada kaliya ee dhejintayda! Sidaa darteed, markan waxaan damacsanaa inaan sameeyo sida uu ii soo jeediyay, inaan noqdo mid rasmi ah sida sameeyaha caaryada “dhabta ah”! Kadib, waxaan si dhab ah u qaatay sawirkii ugu horreeyay aniga oo kaashanaya saaxiibbaday. sida sawirka hoose ee la muujiyey, kaliya caaryada iyo alaabooyinka lagu muujiyey muraayaddayda horteeda, rasmi ah oo nadiif ah, dhammaantood waa sax. laakiin waxaan dareemayaa wax lumay…
Markii aan dhammeeyey sawirrada qaadista, oo qorsheyso inaan dib u socdo. Gabadheena “kadib 90 -kii” ayaa tiri: ma heli karaa sawir leh caaryadan? Waxaan idhi, dabcan! Kadibna waxay bilawdaa inay samayso nooc kasta oo “xirfadle ah” oo leh caaryada, sida samaynta sawir -qaade shaqsiyeed, iyo shaqaalaha kale ee aqoon -is -weydaarsiga dhammaantood waxay ku xidheen kamaradda dambe iyagoo qoslaya, si lama filaan ah jawigii aqoon -is -weydaarsigu wuxuu noqday mid diirran oo is -waafaqaya. Xubnaha kooxdayadu waxay ku faraxsan yihiin waxqabadkooda, waxaana dareen guuleed ka muuqanayay wajiyadooda dhoolla -caddaynta…
Waa hagaag, samaynta qalabaynta waa inay noqotaa kiis dhab ah oo sax ah, laakiin qabashada shaqada oo leh niyadda farxad leh ayaa sidoo kale muhiim u ah shaqaalahayaga. Sidaad ogtihiin, marka waqtiga mashruucu cidhiidhi yahay, shaqaalaheennu badiyaa waxay shaqeeyaan saacado dheeraad ah, xitaa habeenka si ay u ilaaliyaan waqtiga hoggaaminta, ballanka u ilaali macaamiishayada. Way daalan yihiin oo way kacsan yihiin inta hawsha socoto, haddii ay suurtogal tahay inaan tusno ixtiraamka iyo qaddarinta shaqadooda iyo wax soo saarkooda, waayo? Markay ku dhalaalayaan '' shaqadooda '', miyaanay ahayn inaan u oggolaanno inay maqlaan sacabkayaga? Qalabaynta waa qabow, laakiin diirimaad kooxda ka socda!
Hadda maalin, milkiileyaal badan oo ka mid ah aaladaha qalabka ayaa ka cawda: Aad iyo aad bay u adag tahay in la qoro shaqaalaha, iyadoon loo eegayn naqshadeeyayaasha, injineerada ama hawlgallada mashiinka. gaar ahaan kooxda “90 -kii kadib”, sida maskaxdooda ku jirta, ma jirto madadaalo badan oo ku saabsan warshadaha samaynta caaryada. Jiilka cusubi waxay leeyihiin qeexitaankooda ku saabsan shaqada, farxaddu waxay noqotaa mid aad iyo aad muhiim ugu ah in la dhiso oo la xoojiyo kooxda.
Haddaba akhristaha qaaliga ah, miyaad u malaynaysaa inaad geliso xoogaa muuqaal farxad leh shaqadeena maalinlaha ah, nasinta kooxda marka hawsha aan kacsanayn ay hagaagsan tahay iyo in kale? fadlan muuji habdhaqankaaga adigoo ka dooranaya sawirka hoose.
Waqtiga dhejinta: Oct-27-2020